ခက်ခဲနေကြတဲ့ပြည်သူတွေ အတွက်;ဆန်နဲ့ အခြား စားသောက်ကုန်တွေ ကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလိုက်လံလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဝေဠုကျော်….. – Cele Snap
ခက်ခဲနေကြတဲ့ပြည်သူတွေ အတွက်;ဆန်နဲ့ အခြား စားသောက်ကုန်တွေ ကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလိုက်လံလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဝေဠုကျော်…..
April 1, 2021 By Ju Ry Celebrity
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…..ဝေဠုကျော် ကတော့ အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်မှုတွေ အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့အပြင် ပရဟိတအလုပ်တွေကို ဆက်တိုက် လုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ လေးစားချစ်ခင်နေကြရသူတွေထဲမှာ အကယ်ဒမီမင်းသားကြီးဝေဠုကျော်ကလည်း အပါအဝင်ပါပဲ..။ လက်ရှိအခြေအနေတွေမှာ လှူဒါန်းမှုတွေ ဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေတဲ့ ဝေဠုကျော်ကတော့ စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲနေကြတဲ့ ပြည်သူတွေ အတွက် စားနပ်ရိက္ခာတွေ ကိုယ်တိုင်ပေးဝေလှူဒါန်းရင်း အဖိုးအဖွားတွေကိုလည်း ဂါဝရပြုကန်တော့ခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်..။
ဒီကနေ့မတ်လ(၃၁)ရက်နေ့မှာ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်က ခက်ခဲနေကြတဲ့ပြည်သူတွေ အတွက် ဆန်နဲ့ အခြား စားသောက်ကုန်တွေ ကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလိုက်လံလှူဒါန်းပြီး သက်ကြီးရွယ်အိုအဖိုးအဖွားတွေကို အားပေးစကားတွေပြောရင်း ဖေးမကူညီဂါဝရပြုခဲ့တာပါ..။ ဝေဠုကျော်ဖောင်ဒေးရှင်းကတော့ နေ့တိုင်း လိုလိုလှူဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီး စေတနာရှင်တွေပီတိ ကုသိုလ်ယူနိုင်ဖို့ ကိုလည်း ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာကနေ အလှူပုံရိပ်တွေကို ပြန်လည်ဝေမျှထားပါသေးတယ်..။
“31-3-2021 ဝေဠုကျော်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ယနေ့ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်မှ လိုအပ်နေသော အိမ်ထောင်စု ၁၀၀ သို့ ဆန် ၃ပြည် စီ ကြက်သွန် ငါးပိ အာလူး တို့အား သွားရောက် ကူညီ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။ ဝေဠုကျော်ဖောင်ဒေးရှင်း 09455500010(K Pay)(U Soe Thein) 09455500014 09776089484(Wave). .” ဆိုပြီး အလှူ ပုံရိပ်တွေကို ဝေမျှရင်း ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ဖို့ကိုလည်း ဝေဠုကျော် ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ Acc တွေကိုလည်း အသိပေးပြောပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်..။ လိုအပ်နေတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် ထိရောက်စွာ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျမနားမနေ လိုက်လံလှူဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့ ဝေဠုကျော် တို့အဖွဲ့ကိုလည်း ပရိသတ်တွေက အားပေးစကားတွေပြောထားကြပါတယ်..။
ပရိတျသတျကွီးရေ…..ဝဠေုကြျော ကတော့ အနုပညာလောကမှာ အောငျမွငျမှုတှေ အခိုငျအမာရရှိထားတဲ့အပွငျ ပရဟိတအလုပျတှကေို ဆကျတိုကျ လုပျဆောငျမှုတှကွေောငျ့လညျး ပရိသတျတှရေဲ့ လေးစားခဈြခငျနကွေရသူတှထေဲမှာ အကယျဒမီမငျးသားကွီးဝဠေုကြျောကလညျး အပါအဝငျပါပဲ..။ လကျရှိအခွအေနတှေမှော လှူဒါနျးမှုတှေ ဆကျတိုကျပွုလုပျနတေဲ့ ဝဠေုကြျောကတော့ စားဝတျနရေေး ခကျခဲနကွေတဲ့ ပွညျသူတှေ အတှကျ စားနပျရိက်ခာတှေ ကိုယျတိုငျပေးဝလှေူဒါနျးရငျး အဖိုးအဖှားတှကေိုလညျး ဂါဝရပွုကနျတော့ခဲ့တာ တှရေ့ပါတယျ..။
ဒီကနမေ့တျလ(၃၁)ရကျနမှေ့ာ တောငျဒဂုံမွို့နယျက ခကျခဲနကွေတဲ့ပွညျသူတှေ အတှကျ ဆနျနဲ့ အခွား စားသောကျကုနျတှေ ကို ကိုယျတိုငျကိုယျကလြိုကျလံလှူဒါနျးပွီး သကျကွီးရှယျအိုအဖိုးအဖှားတှကေို အားပေးစကားတှပွေောရငျး ဖေးမကူညီဂါဝရပွုခဲ့တာပါ..။ ဝဠေုကြျောဖောငျဒေးရှငျးကတော့ နတေို့ငျး လိုလိုလှူဒါနျးမှုတှပွေုလုပျနတောဖွဈပွီး စတေနာရှငျတှပေီတိ ကုသိုလျယူနိုငျဖို့ ကိုလညျး ဖောငျဒေးရှငျးရဲ့ဖစျေ့ဘှတျစာမကျြနှာကနေ အလှူပုံရိပျတှကေို ပွနျလညျဝမြှေထားပါသေးတယျ..။
“31-3-2021 ဝဠေုကြျောဖောငျဒေးရှငျးမှ ယနေ့ တောငျဒဂုံမွို့နယျမှ လိုအပျနသေော အိမျထောငျစု ၁၀၀ သို့ ဆနျ ၃ပွညျ စီ ကွကျသှနျ ငါးပိ အာလူး တို့အား သှားရောကျ ကူညီ ထောကျပံ့ပေးခဲ့ပါသညျ။ ဝဠေုကြျောဖောငျဒေးရှငျး 09455500010(K Pay)(U Soe Thein) 09455500014 09776089484(Wave). .” ဆိုပွီး အလှူ ပုံရိပျတှကေို ဝမြှေရငျး ဆကျသှယျလှူဒါနျးနိုငျဖို့ကိုလညျး ဝဠေုကြျော ဖောငျဒေးရှငျးရဲ့ Acc တှကေိုလညျး အသိပေးပွောပွထားတာ တှရေ့ပါတယျ..။ လိုအပျနတေဲ့ ပွညျသူတှအေတှကျ ထိရောကျစှာ ကိုယျတိုငျ ကိုယျကမြနားမနေ လိုကျလံလှူဒါနျးမှုတှပွေုလုပျနတေဲ့ ဝဠေုကြျော တို့အဖှဲ့ကိုလညျး ပရိသတျတှကေ အားပေးစကားတှပွေောထားကွပါတယျ..။
အနာဂါတ်ရဲ့ လူငယ်တွေက နိုင်ငံ့ရဲ့ အနာဂါတ်လည်း ဖြစ်လို့ ဒီဆုံးရှုံးမှုတွေက အင်မတန် ဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းလှပါတယ်ဆိုတဲ့ သန္တာလှိုင်…..
ကိုဗစ်ပိုးကူးစက်ခံရပြီး ရုတ်တရက်အောက်စီဂျင်ကျသွားလို့မောဟိုက်နေတဲ့ အခြေအနေမှာတောင်ဆေးရုံတက်လို့မရလို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့ အဆိုတော်ယုန်လေး
ဒီကနေ့မှာ အသက်(၃၉)နှစ်ပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ မင်းသမီးချောလေး အကယ်ဒမီ သက်မွန်မြင့်
ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ညီဖြစ်သူ မင်းသွေးအားရည်စူးပြီး အောက်စီဂျင်ဝယ်ယူရန်အတွက် အလှူငွေများလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ နေတိုး
ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံရပြီး အနံ့ပျောက်ကာ နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ ဟာသလူရွှင်တော် ငြိမ်းချမ်း
ဒီကနေ့ ၀ါဆိုလပြည့်နေ့ နံနက် (၇:၀၀)နာရီဝန်းကျင်မှာ အောက်စီဂျင်ကျပြီးကွယ်လွန်သွားတဲ့ လူကြမ်းသရုပ်ဆောင် ဦးအရိုင်းမင်း